Announcement for 5th week event(17th April) (Ended)
Try Together At Japanチーム【5回目の活動】
⏰ 時間： 9:30 AM
◆服装 : 白色優先 ・雨の日なので風邪ひかないような服
Announcement for 5th week event
We have to change the program abit for the 5th week activity coming Saturday (17.4.2021) due to the possibility of rain. Since that day is the First day of Myanmar New Year, we will be praying at Pagoda for those fallen martyrs instead of Pamphlets Rally. Besides TTAJ Group members, people who would like to participate, the program details is as follows.
📆 Date - 17.4.2021 Saturday (9:30 AM)
📍Gathering place and time- Kamakura Statue
Kindly inform us through Page Messenger for people who wants to join the activity.
1. Initial Prayer and Five Virtues
2. Reciting Metta Sutta
3. Reciting Patthana
4. The Chant of Metta
5. Sharing Merits
Kindly download the iDhamma App in prior! https://apps.apple.com/jp/app/idhamma/id420570850?l=en
We will be preparing those Prayers via TTAJ website for Android Users since that app is available only in iOS.
📌 We recommend the participants to wear white and Nway Oo Taw Hlam Yayy clothes for those who already owned it. But please feel free to wear what is convenient for you. We recommend wind breakers and rain proof coats since there will be rain and heat tech for comfortability.
🌸🌸We have to cancel the Pamphlets Rally due to the rain in Tokyo, but do contact our Page if you want to do Phamplets Rally at other place where there is no rain. We are here to support and help for any compulsory items!
TTAJ ရဲ့ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အစီအစဉ် ကြေညာချက်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ လာမယ့်အပတ် စနေနေ့ (17-4-2021) မှာ မိုးရွာဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများတဲ့အတွက် ဒီတပတ်ရဲ့ အစီအစဉ်လေးကို အနည်းငယ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ် ။ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး နှစ်ဆန်း (၁) ရက်နေ့ဖြစ်တာမို့ Pamphlets မဝေဖြစ်ဘဲ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် ရည်စူးပြီးတော့ ဘုရားမှာ ဆုတောင်းပွဲလေးလုပ်ပါမယ် ။ TTAJ ရဲ့ Group Members တွေ အားလုံးအပြင်အခြား လာရောက်ပူးပေါင်း ပါဝင်ချင်သူများ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လာရောက်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ် ။
📆 နေ့ရက် - (17-4-2021) စနေနေ့
📍စုရပ် အချိန် နှင့်နေရာ - Kamakura ဘုရား (9:30 AM)
လာရောက် ပူးပေါင်းလိုသူများ Page Messenger မှတဆင့် ကြိုပြောပေးထားစေချင်ပါတယ် ။
၄)မေတ္တာပို့ (မေတ္တာသုတ်လာ မေတ္တာပို့)
iDhamma Appလေးdownလာပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ https://apps.apple.com/jp/app/idhamma/id420570850?l=en
iOS versionပဲရှိတဲ့ အတွက်၊ Android Userတွေ အတွက် TTAJ website ကတဆင့်ကြည့်ပြီးရွတ်လို့ရအောင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
※ နွေဦးတော်လှန်ရေး အင်္ကျီရှိသူများ ဝတ်လာလို့ရပါတယ်။
အဖြူရောင်မရှိလဲ အဆင်ပြေရာ ဝတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ မိုးရွာမှာဖြစ်တဲ့ အတွက်အနွေးထည်လေတိုးတာခံပြီး ရေစိုနည်းနည်းခံတာလေးဝတ်လာရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်ချင် Heat Tech ဝတ်လာပါ
🌸🌸တိုကျိုမှာ မိုးရွာမှာဖြစ်လို့ Pamphlets & Tissues ဝေမယ့် အစီအစဉ်လေးကို ဖျက်လိုက်ပေမယ့် အခြား မိုးလွတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဝေချင်တဲ့အဖွဲ့များရှိရင် Page ကို ဆက်သွယ်ပေးပါနော်။ လိုအပ်တာတွေကို TTAJ မှ ပြောပြကူညီပေးပါ့မယ် ။